Biyo-Weeliyaha Biyo-la’aanta ah ense Bixiyeyaasha biyaha is-qurxinta ah ee Poland
Adiga ayaa ubaahan Bixiyeyaasha biyaha shirkada, xafiiska? Barta Biyaha oo ah wakiilka keliya Is qurxinta gudaha Poland ayaa lasiiyaa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah loo isticmaalo makhaayad, hoteelo, xafiiska, xafiisyada, rugo caafimaad iyo isbitaalo, iskuulada, jardiinooyinka iyo xarumaha ciyaaraha, Goobaha jimicsiga iyo guri.
Cosmetal waa maanta soosaaraha ugu weyn ee Talyaani iyo hogaamiyaha caalamiga ah ee soo saarista xalal hal abuur leh oo biyo cabitaan ah.
Soo-saarista qaboojiyeyaasha, dhalooyinka iyo biyahaba, waxaa 100% laga sameeyay Talyaaniga.
Is qurxintu waxay ku faantaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu ballaaran ee laga helo warshadaha, labadaba marka la eego noocyada wax soo saarka la keeno biyo - heerkulka qolka, qabow, kuleyl, dhalaalaya - iyo sidoo kale moodallo kala duwan oo la heli karo.
Balanqaadyada caalamiga ah, oo ay weheliso tayada waxsoosaarkooda, ayaa u oggolaaday shirkadan farshaxanimada ah inay gaadho heer sare oo ay noqoto alaab-iibiyaha qaar ka mid ah kooxaha wax iibsiga ugu muhiimsan, labadaba gudaha Talyaaniga iyo adduunka oo dhan, kuwaas oo loo qaabeeyo naqshadaha caadooyinka ah.
Hi-Class waa biyo-saare heer sare ahy, loogu talagalay oo loogu talagalay dhammaan codsiyada iyo dhex-dhexaadka. Waxay isticmaashaa xalalkii ugu dambeeyay ee farsamada iyo agabkii ugu wanaagsanaa ee dammaanad qaadaya waxtarka ugu sarreeya iyo isku halaynta, oo kuu oggolaanaya inaad gaarto illaa 45 l / h oo qabow iyo biyo dhalaalaya iyo 13 l / h biyo kulul.
Waxay adeegtaa afar nooc oo biyo ah: heerkulka qolka, qabow, dhalaalaya iyo kuleylka, kuwaas oo lagu shubo karo weelal dhaadheer oo kaladuwan iyadoo loo mahadcelinayo tuubbada la hagaajin karo. Foomka casriga ah; hore wuxuu ka sameysan yahay muraayadda muraayadaha madow oo lagu daro bir daxaleysan iyo gudi xakameyn suuxdin leh, abuurista shey ay ku dheehan tahay adeegsiga aadka u sarreeya.
Bixiyeyaasha biyaha-free-dhululubo ee Pro-Stream. Qabow, kulul iyo biyo kulul
PRO-STREAM waa daahir oo leh naqshad casri ah oo casri ah, oo leh tiirarka heerkulka kuleylka leh, guddi xakameyn taabasho ah, si cad u wargalinaya xaaladda hawlgalka aaladda, oo ay ku jiraan howlaha: diyaar, kuleylka, dami. Waxay ku shaqeysaa noocyo kaladuwan oo leh kuleyliyaha, qaboojiyaha iyo nidaamka gaaska.
Nidaamku wuxuu sidoo kale leeyahay nidaam xasaasi ah oo xakameynaya habka hawlgalka ee aaladda, oo si toos ah u yareynaysa isticmaalka tamarta. Waxay fidisaa biyaha kulul 98 ° C laga bilaabo markii la shidaa, oo awood u leh inay ku buuxiso 215 koob saacaddii oo leh awood 250 ml ah, iyo sidoo kale xulashooyinka qabow iyo biyo dhalaalaya ilaa 15 l / saac. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo shaah, kafee iyo cabitaanno kale oo kulul si dhakhso leh oo wax ku ool ah.
Bixiyeyaasha Aquality Water
Aquality - biyo-fidiyaha biyaha-daboolka leh: hufan, adag, leh muuqaal casri ah, oo laga sameeyay agabka ugu wanaagsan ee hubinaya hawlgal la isku halleyn karo oo waara. Xalalka farsamada iyo farsamada ee la dabaqay waxay xaqiijinayaan hawlgal sahlan oo aamin ah, iyagoo si weyn u saamaxaya kharashaadka hawlgalka iyadoo la yareeyo isticmaalka tamarta.
Biyaha qaboojiye ee biyaha xorta ahi waxay siinayaan 22 l / h biyo la qaboojiyey oo la sifeeyay, oo ku filan 40 qof.
Aquality waxay u adeegsaneysaa tikniyoolajiyadda Bangiga ICE ee kuleyl biyoodan, oo si toos ah ugu xiran biyaha.
Ma jiro kayd biyo-u-dhisan, oo bixiya heer sare oo ilaalinta nadaafadda ah maadaama biyuhu aan la kaydin dhammaadka usbuuc-dhammaadka iyo ciidaha.
Cuntada kuleyliyaha biyaha ayaa badbaadisa meel keydinta Naqshad qurxinta leh oo ku habboon deegaan kasta.
Aquality waxay leedahay furitaan ballaaran oo kuu oggolaaneysa inaad buuxiso xiisaha iyo dhalada.
Kaamil ahaan nadaamka biyaha guriga ama qaboojiye xafiis ahaan
Kaydiyaha iskujira (7 koob)
Hayn la'aan haanta / Kaydinta Tooska ah
Biyo joogto ah oo biyo la safeeyey
Mashiinka warshadda la heli karo
Nadaafadda, si fudud-u-nadiifinta dusha sare ee nadiifinta
Noocyo la heli karo: biyaha heerkulka qolka, qabow, kuleyl, dhalaal.
Bixiyeyaasha biiyaha-biiyaha-birta-J-Class ah
Bixiyeyaasha biyaha J-Class la mid yihiin tayada ugu sareysa iyo tikniyoolajiyadda aadka u sarreysa, taas oo iyaga ka dhigaysa aalad lagu kalsoonaan karo oo ku jirta gacanta isticmaaleyaasha, isku xirnaantiisa awgeed, waxaa loo isticmaalaa xafiisyada, baararka, makhaayadaha yaryar iyo guryaha.
Waxaa lagu heli karaa laba nooc oo kala duwan: TOP dhinaca counter iyo IN counter, gudbinta afar nooc oo biyo ah: heerkulka qolka, biyaha qabow, biyaha kulul 98 ° C iyo biyo kaarboon ah, oo leh laba awood 30 l / h iyo 45 l / saac.
Qulqulka Niagara - biyo-waraabinnada Qoyskan ayaa ah aalado aqoonyahanno waara oo lagu kalsoonaan karo oo beddela biyaha dhalada ah, fududeeya hawlgallada, tirtiraya baahida kormeerka iyo kaydinta, u kaydiya waqti iyo fududaynta saadka, oo bixiya heerarka ugu sarreeya iyo hufnaanta.
Sidaa daraadeed, waxaa loogu talagalay codsiyada ballaaran, iyagoo damaanad qaadaya hawlgal aan dhibaato lahayn marka loo qaybiyo biyo aad u badan oo kaarboon iyo kaarboon ah, oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u buuxiso dhammaan noocyada maraakiibta isla markaana yareyso kharashyada. Waxaa jira saddex moodal oo ah: kahortagga sare, IN ka hooseeya miiska iyo tuugada.
Kaamil ah gudbinta xaddi badan oo biyo qabow, labadaba wali iyo dhalaalaya. Waxay ku habboon tahay qaybta cuntada: baararka, makhaayadaha, hoteelada iyo canteens-yada. Bixiyuhu wuxuu ku xirnaan karaa nidaam kasta oo qarsoon si uu u buuxiyo shuruudihii looga baahin karo oo dhan. Fursadda isticmaalka iyo doorashada qalabka tayada sare leh waxay dammaanad qaadayaan nadaafadda ugu badan isla mar ahaantaana waxay yareyn doonaan baahida dayactir aan caadi ahayn.
Sylintage-ka biyaha bilaashka ah ee H2O ayaa kudarsamaya
H2O waxaan nahay biyo-dibiye leh cabbir is haysta, naqshad casri ah, hawlgal sahlan oo dareen leh, oo ah il wanaagsan oo biyo dhadhan fiican leh heerkulka qolka, qabow, dhalaalaya iyo kuleylka.
Waxay ku timaadaa laba nooc: TOP countertop iyo IN ka hooseysa dhanka loo yaqaan 'preutrtop'.
Bixiyeyaasha Biyo-la’aanta dhululubo ee G ZERO
Tuubada-Chrome-steel daboolan oo leh dabool bir madow ama jabsan.
Bixiyeyaasha dhul-biyoodka Acqua Alma Point - Khibrad cusub oo farsamaysan oo dhijitaalka ah si loo ilaaliyo meeraheena
Acqua Alma Point waa adeeg-bixiye caqli badan oo faafin kara nooc kasta oo biyo ah, u udgoon si uu u abuuro cabitaanno caadiya, laakiin inta badan dhammaantood waxay si firfircoon ula falgalaan adeegsadaha iyaga oo u maraya Acqua Alma Refill APP iyo dhalo caqli leh oo leh sumad NFC. Thanks to dalabka, adeegsaduhu wuxuu maamuli karaa astaamaha, doorbidyada, cuntada, had iyo jeer hubi heerka biyaha fuuqbaxa oo hel meesha ugu dhow ee loo yaqaan 'Acqua Alma dhibic'. In kasta oo ay u mahadcelineyso NFC, dhalada waxay la xiriirtaa astaanta isticmaaleha oo ay aqoonsan tahay mashiinka, dib ugu xasuusato meelaha ugu cadcad ama xayeysiinta ay ku dhex shaqeyso astaanta.
Acqua Alma PointBixiyeyaasha biyo-xooriyaha-ka-bilaashka ahBixiyeyaasha biyaha-aan lahayn dhululubodhalada biyaha si ay u daweeyaanBixiyeyaasha biyaha gurigabiyo siinta xafiiskabixinta biyaha guga gurigabiyo siiyaasha shirkadahabiyo u siinta shirkadahaqaybinta biyaha macdantaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee carruurtaBixiyeyaasha biyaha iftiinka lehBixiyeyaasha Makiro biyoBiyo-siiyaha Warsawqalabka biyaha kululBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyaha5l Bixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee dhaladatuubada biyaha dhululuboQiimaha Bixiyeyaasha BiyahaBixiyeyaasha biyaha hadiyadda dabiiciga ahBixiyeyaasha biyaha ee carruurtabiyo-siiyaha xafiiskaBixiyeyaasha biyaha gurigaQiimaha Biiyaha biyaha gurigadib u eegista biyaha gurigaBixiyeyaasha biyaha ee shirkaddaBiyo-cabista biyahaeden Bixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha kaarboon-gaaska lehBixiyeyaasha kaarboon-gaaska leh ee gurigaeden dareeraha biyaha dilaacaBiyo-wade ayaa Bixinaysa sida ay u shaqeysoBixiyeyaasha biyaha macdantaBixiyeyaasha biyaha ee dhalooyinkaBiyo-cabista biyahaBiyo-qabeyaha qaboojiyahaBiyo kululeeyaha qaboojiyaha sida ay u shaqeysoBiyo-siiyaha WarsawBixiyeyaasha biyaha kirada ahbiyaha kirada bixiyaha ahKoronto Bixiyetuubada biyaha tuurabiyo-qabeyaha qaboojiyahaBixiyeyaasha biyaha qabowBixiyeyaasha biyaha ee shirkadaha iyo xafiisyadaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyaha ee shirkadahabiyo-siiyaha xafiiskaBixiyeyaasha biyaha gurigaeden biyo-wadeennadaBiyo daadashadaBiyo-waraabeyaasha biyaha cabbi karaBixiyeyaasha biyaha gugaBixiyeyaasha biyahaHal Bixiye Biyobiyo cabitaanBixiyeyaasha biyaha qaboojiyahaBiyo-xidheenbiyo xafiisyobiyo xafiiskabiyo liiska liiska xafiiskaBixiyeyaasha biyaha gurigaBixiyeyaasha biyahabiyo qaybiyaha macdantaBiyo ku waardiyeyaasha shirkadahabiyaha ka keena warshadabiyaha ka yimaada shirkad iibiya shirkadobiyaha ka keena keeniyaha guriga ilaa gurigabiyaha ka yimaada dib u eegista daawadabiyo leh korontobiyaha guga markay guriga keenaan